ခေါက်ချိုးစမတ်ဖုန်းတွေအတွက် LG ရဲ့ အဖြေ – Myanmar Mobile App
ချက်ချင်းရနိုင်မယ့် ခေါက်ချိုးစမတ်ဖုန်းလို့ ပြောရမယ်။
ဒီကနေ့မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ LG V50 အသစ်က တော့ Snapdragon 855 processor ၊ ဘတ်ထရီပမာဏခပ်များများ၊ 5G တို့ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ LG ရဲ့ ပထမဆုံး 5G ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။ V50 ဟာ entire second screen နဲ့ ထွက်ရှိလာမယ်လို့ သိရပါတယ်။
LG Dual Screen ဖုန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ၆.၄လက်မ display ကို အသုံးပြုထားပြီး secondary panel ကတော့ ၆.၂လက်မ ဒေါင့်ဖြတ်အထိသာ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘေးဘောင်တွေကတော့ ကြီးနေတုန်းပါပဲ။ Dual Screen system လေးကို စမ်းသပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် အားသာချက်၊ အားနည်းချက်လေးတွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
စစချင်းတော့ ကောင်းတာလေးတွေ ပြောရအောင်။ screen အပိုပါလာတဲ့အပိုင်းမှာတော့ ၀ယ်လိုအားရှိနိုင်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ screen ထုတ်လုပ်သူအတော်များများက အိတ်ဆောင်အရွယ်တွေထုတ်နေကြပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကလည်း မနည်းပါဘူး။ တကယ်တော့ LG Dual Screen ပါတဲ့ LG V50ာအိတ်ဆောင်အရွယ်လောက်ပါပဲ။ ထူသွားတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း သယ်ဆောင်မှုကို မထိခိုက်စေပါဘူး။ နောက်တစ်ခုကတော့ ပတ္တာရဲ့ဒီဇိုင်းပါပဲ။ ၃၆၀ဒီဂရီအထိ လှည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မှန်သဖွယ်အသုံးပြုနိုင်လို့ အခြားသူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုဓါတ်ပုံရိုက်ပေးနေချိန်မှာ ဖရိန်ဝင်ရဲ့လား တကူးတကစစ်နေဖို့ မလိုအပ်တော့ပါဘူး။
LG က range အင်မတန်နည်းပြီး bandwidth ခပ်မြင့်မြင့်ကိုသုံးထားတဲ့ Wi-Fi chipset ကို ထည့်သွင်းထားလို့ V50 နဲ့ second screen ကို ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာ နှောင့်နှေးမှုမရှိပါဘူး။ V50 plus Dual Screen combo ကို စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ နှေးတယ်လို့ကို မခံစားရလိုက်ရပါဘူး။ desktop မှာ Monitor နှစ်လုံးနဲ့ အလုပ်လုပ်နေသလို ခံစားရမှာပါ။
V50 ရဲ့ အနောက်ဘက်မှာ Pogo pins တွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ကတော့ Dual Screen case ဆီကို ဖုန်းရဲ့ပါဝါတွေ ချိတ်ဆက်ပေးထားတာပါ။ ဒါကြောင့် second screen အတွက် ပါဝါသက်သက်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘတ်ထရီပမာဏတော့ များများသုံးလိမ့်မယ်။
အားနည်းချက်ကတော့ သူတို့အသစ်ပေးစွမ်းမယ့်အရာတွေက ခန့်မှန်းလို့ရနေတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ screen နှစ်ခုက အရည်အသွေးထပ်တူမကျနိုင်လောက်ဘူး။ color temperature ၊ viewing angle တွေ ခြားနားနေတယ်။ အရွယ်အစားပိုင်းလည်း သိပ်သဘောမကျမိဘူး။ LG ရဲ့ software design က မဆိုးဘူးဆိုပေမယ့်လည်း ဆန်းပြားနေတာတွေတော့ ရှိနေသေးတယ်။ on-screen keyboard လိုမျိုးပေ့ါ။ racing game ဆော့တဲ့အခါ second-screen ရဲ့ simulated gamepad controller နဲ့ အသားမကျတာမျိုး။ မပြည့်စုံတာမျိုးလေးတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
တကယ်လို့များ LG က software ကို ပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင် . . . ။ LG ဆီကနေ နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ရတဲ့အရာမဟုတ်လား။ 5G phone လုပ်လိုက်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း သူတို့ဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ မသုံးနိုင်သေးဘူးလေ။ LG Dual Screen ကတော့ မက်မောစရာနည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အိတ်ဆောင်အရွယ်ဆိုတာက ဈေးကွက်ကိုဖမ်းစားနိုင်မလား စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
LG ကတော့ အနာဂတ် 5G device တွေမှာ second display ထည့်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ ဆိုလိုတာက 5G LG phone တိုင်းမှာ Dual Screen လေးတွေ ပါဝင်လာတော့မှာပါ။ US V50 ၀ယ်သူတွေတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အမေရိကန်ဈေးကွက်မှာ မရနိုင်လို့ပါ။
ဈေးနှုန်းကတော့ မသိရသေးပါဘူး။ သေချာတာကတော့ V50 plus Dual Screen ကတော့ Samsung Galaxy Fold ၊ Huawei Mate X ထက်တော့ သက်သာပါလိမ့်မယ်။
ခကျြခငျြးရနိုငျမယျ့ ခေါကျခြိုးစမတျဖုနျးလို့ ပွောရမယျ။
ဒီကနမေိ့တျဆကျလိုကျတဲ့ LG V50 အသဈက တော့ Snapdragon 855 processor ၊ ဘတျထရီပမာဏခပျမြားမြား၊ 5G တို့ကို ထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။ ဟုတျပါတယျ။ LG ရဲ့ ပထမဆုံး 5G ဖုနျးဖွဈပါတယျ။ V50 ဟာ entire second screen နဲ့ ထှကျရှိလာမယျလို့ သိရပါတယျ။
LG Dual Screen ဖုနျးလေးဖွဈပါတယျ။ ၆.၄လကျမ display ကို အသုံးပွုထားပွီး secondary panel ကတော့ ၆.၂လကျမ ဒေါငျ့ဖွတျအထိသာ ကနျ့သတျထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဘေးဘောငျတှကေတော့ ကွီးနတေုနျးပါပဲ။ Dual Screen system လေးကို စမျးသပျခှငျ့ရခဲ့တဲ့အတှကျကွောငျ့ အားသာခကျြ၊ အားနညျးခကျြလေးတှကေို ပွောပွခငျြပါတယျ။
စစခငျြးတော့ ကောငျးတာလေးတှေ ပွောရအောငျ။ screen အပိုပါလာတဲ့အပိုငျးမှာတော့ ဝယျလိုအားရှိနိုငျတယျလို့ မွငျမိပါတယျ။ screen ထုတျလုပျသူအတျောမြားမြားက အိတျဆောငျအရှယျတှထေုတျနကွေပါတယျ။ ဈေးနှုနျးကလညျး မနညျးပါဘူး။ တကယျတော့ LG Dual Screen ပါတဲ့ LG V50ာအိတျဆောငျအရှယျလောကျပါပဲ။ ထူသှားတယျဆိုပမေယျ့လညျး သယျဆောငျမှုကို မထိခိုကျစပေါဘူး။ နောကျတဈခုကတော့ ပတ်တာရဲ့ဒီဇိုငျးပါပဲ။ ၃၆၀ဒီဂရီအထိ လှညျ့နိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မှနျသဖှယျအသုံးပွုနိုငျလို့ အခွားသူတဈယောကျက ကိုယျ့ကိုဓါတျပုံရိုကျပေးနခြေိနျမှာ ဖရိနျဝငျရဲ့လား တကူးတကစဈနဖေို့ မလိုအပျတော့ပါဘူး။
LG က range အငျမတနျနညျးပွီး bandwidth ခပျမွငျ့မွငျ့ကိုသုံးထားတဲ့ Wi-Fi chipset ကို ထညျ့သှငျးထားလို့ V50 နဲ့ second screen ကို ဆကျသှယျတဲ့နရောမှာ နှောငျ့နှေးမှုမရှိပါဘူး။ V50 plus Dual Screen combo ကို စမျးသပျကွညျ့တဲ့အခြိနျမှာ နှေးတယျလို့ကို မခံစားရလိုကျရပါဘူး။ desktop မှာ Monitor နှဈလုံးနဲ့ အလုပျလုပျနသေလို ခံစားရမှာပါ။
V50 ရဲ့ အနောကျဘကျမှာ Pogo pins တှေ ရှိပါတယျ။ သူတို့ကတော့ Dual Screen case ဆီကို ဖုနျးရဲ့ပါဝါတှေ ခြိတျဆကျပေးထားတာပါ။ ဒါကွောငျ့ second screen အတှကျ ပါဝါသကျသကျမလိုအပျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဘတျထရီပမာဏတော့ မြားမြားသုံးလိမျ့မယျ။
အားနညျးခကျြကတော့ သူတို့အသဈပေးစှမျးမယျ့အရာတှကေ ခနျ့မှနျးလို့ရနတေယျ။ ပထမဆုံးအနနေဲ့ screen နှဈခုက အရညျအသှေးထပျတူမကနြိုငျလောကျဘူး။ color temperature ၊ viewing angle တှေ ခွားနားနတေယျ။ အရှယျအစားပိုငျးလညျး သိပျသဘောမကမြိဘူး။ LG ရဲ့ software design က မဆိုးဘူးဆိုပမေယျ့လညျး ဆနျးပွားနတောတှတေော့ ရှိနသေေးတယျ။ on-screen keyboard လိုမြိုးပေ့ါ။ racing game ဆော့တဲ့အခါ second-screen ရဲ့ simulated gamepad controller နဲ့ အသားမကတြာမြိုး။ မပွညျ့စုံတာမြိုးလေးတှလေညျး ရှိတတျပါတယျ။
တကယျလို့မြား LG က software ကို ပွငျလိုကျမယျဆိုရငျ . . . ။ LG ဆီကနေ နှဈပေါငျးမြားစှာစောငျ့ဆိုငျးနခေဲ့ရတဲ့အရာမဟုတျလား။ 5G phone လုပျလိုကျတယျဆိုပမေယျ့လညျး သူတို့ဝယျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ မသုံးနိုငျသေးဘူးလေ။ LG Dual Screen ကတော့ မကျမောစရာနညျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး အိတျဆောငျအရှယျဆိုတာက ဈေးကှကျကိုဖမျးစားနိုငျမလား စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။
LG ကတော့ အနာဂတျ 5G device တှမှော second display ထညျ့ဖို့စီစဉျနပေါတယျ။ ဆိုလိုတာက 5G LG phone တိုငျးမှာ Dual Screen လေးတှေ ပါဝငျလာတော့မှာပါ။ US V50 ဝယျသူတှတေော့ စိတျမကောငျးပါဘူး။ အမရေိကနျဈေးကှကျမှာ မရနိုငျလို့ပါ။
ဈေးနှုနျးကတော့ မသိရသေးပါဘူး။ သခြောတာကတော့ V50 plus Dual Screen ကတော့ Samsung Galaxy Fold ၊ Huawei Mate X ထကျတော့ သကျသာပါလိမျ့မယျ။
Posted on July 7, 2018 Author Ko Nyi
SpaceX နဲ့ Boring Company မှ အင်ဂျင်နီယာများဟာ Tham Luang ဂူထဲ ပိတ်မိနေတဲ့ ဘောလုံး အသင်းကို ကယ်တင်ရာမှာ ကူညီဖို့ ထိုင်းကို ထွက်သွားကြတာ ရက်အနည်းငယ် ရှိပါပြီ။ အခုတော့ စီအီးအို အီလွန်မတ်စ်က Falcon9Rocket မှ အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ကလေး တစ်ကိုယ်စာ ၀င်နိုင်တဲ့ ရေငုပ်သင်္ဘောကို တီထွင်နေတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ယခုတစ်ပတ် အစောပိုင်းက မတ်ခ်ဟာ ဂူကို အပေါက်ဖောက်ခြင်း၊ လေမှုတ်သွင်းနိုင်တဲ့ Tube ကို တည်ဆောက်ခြင်း ကနေ Kevlar Escape Pod ကို တီထွင်ခြင်းအထိ နည်းလမ်းများကို စဉ်းစားခဲ့သေးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အခုတော့ သူက ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ ဂူထဲဝင်နိုင်မယ့် အရွယ်သေး […]